Tusahaaga Degdegga ah ee Qorshaynta Ka -baxga Georgia inta lagu jiro Faafida
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Boostada martida » Tusahaaga Degdegga ah ee Qorshaynta Ka -baxga Georgia inta lagu jiro Faafida
Maxaad aad ugu xiisay dunidii ka horraysay masiibada? Weydii su’aashan qof kasta oo xiiseeya safarka waxayna ku tagi doonaan dhalanteed ku saabsan inta ay tebayaan sahaminta magaalooyinka cusub, cunnooyinka, iyo dhaqamada. In kasta oo masiibada COVID-19 ay saameysay dhinacyo kala duwan oo nolosheena ah, saameynta ay ku leedahay qorshayaasha safarka waa mid aad u weyn oo la iska indho tiri karo.
Joorjiya, oo leh qaabdhismeedkeeda firfircoon, muuqaalo is dhiibid ah, iyo taariikh kala duwan, waxay siisaa kayd qaali ah oo ay kaga baxsadaan dadka ka dheregsan joogitaanka guriga. Gobolka koonfur-bari waxa uu leeyahay isku-dhafan isku-dhafan oo ah tuulooyin qurxoon, magaalooyin aan qurux badnayn, iyo magaalooyin magaalo. Waxay u haysaa wax u kaydsan qof kasta oo socdaal ah.
Laakiin haddii aad qorsheyneyso safar aad ku aado Georgia inta uu jiro masiibada, waxaad la kulmi doontaa su’aalo badan iyo jahawareer.
Ma nabad baa in hadda loo safro Georgia? Ma booqan karaa Georgia xitaa haddii aanan si buuxda u tallaalin? Ma u baahanahay inaan xirto maaskaro meelaha dadweynaha? Miyaan u baahanahay inaan qaato warbixinta baaritaanka RT-PCR ee taban si aan u galo gobolka?
Kaliya waa su’aalo kooban oo maskaxdaada ku soo qulqulaya isla marka aad ka fikirto u safrida Georgia. Boggan, waxaan ku diyaarinay dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay si aad ugu raaxaysato fasax ammaan iyo madadaalo leh oo Georgia ah. Bal aan eegno.
Waa sidee Xaaladda COVID-19 ee Georgia hadda?
Tirada cudurrada COVID-19 ee la xaqiijiyay ee Georgia ayaa sii kordhayay tan iyo 5tii Luulyo, 2021, markii gobolku arkay celceliska ugu hooseeya sannadka. Gobolku wuxuu soo sheegay celcelis ahaan 7,400 xaaladood oo cusub maalin kasta usbuucii la soo dhaafay. Taasi waa 25x boodbood marka loo eego tirooyinkii toddoba toddobaad ka hor.
Ku dhawaad ​​5,000 bukaan COVID-19 ah ayaa lagu daweynayaa isbitaallada kala duwan ee Georgia. Xarumaha daryeelka caafimaadka ee gobolka ayaa ka hawlgala 90% awooddooda ICU.
Miyay taasi ka dhigan tahay inaad iska ilaaliso inaad u safarto Georgia gebi ahaanba?
Hagaag, ma jirto hab fudud oo looga jawaabi karo su'aashan. Waa fikrad wanaagsan inaad ka fogaato nooc kasta oo safar aan muhiim ahayn inta lagu jiro aafada. Laakiin waxaa jira siyaabo lagu xaqiijin karo badbaadadaada iyo ladnaantaada, xitaa haddii aad doorato inaad u safarto Georgia hadda.
Ka warran Xaddidaadaha Socdaalka ee Georgia?
Qoraalkan, Georgia waxay u furan tahay dadka safarka ah ee ka imanaya Mareykanka Gobolka ayaa sidoo kale soo dhaweynaya dalxiisayaasha caalamiga ah, oo ka horjoogsanaya dhowr dal, sida Hindiya, Iran, Koonfur Afrika, iyo Shiinaha. Sidoo kale, ma jiraan wax shuruudo khasab ah oo loogu talagalay dadka safarka ah inay qaataan karantiil ka dib markay yimaadaan Georgia.
Socotada caalamiga ah weli waa inay bixiyaan warbixin taban RT-PCR (oo aan ka weyneyn 72 saacadood) markay yimaadaan. Ma jiro xeerar noocan oo kale ah oo loogu talagalay socotada gudaha.
Inta badan goobaha dalxiiska, maqaayadaha, baararka, iyo goobaha kale ee aan muhiimka ahayn ee ganacsiga waa furan yihiin. Laakiin waxay ku shaqeynayaan awood yar, waxaana laga yaabaa inay geysay tallaabooyin badbaado oo dheeri ah COVID-19. Sidoo kale, gaadiidka dadwaynuhu wuxuu ku shaqeeyaa awood xadidan inta badan magaalooyinka.
Sidee Loo Qorsheeyaa Safarkaaga Georgia?
Marka hore, waa inaad xusuusataa in xannibaadaha safarka ee la xiriira masiibada ay si joogto ah u soo kordhayaan. Hubi inaad ka hubiso tilmaamaha ugu dambeeyay ilo aamin ah, sida Degelka CDC. Sidoo kale, fiiri wararka maxalliga ah si aad ula socoto xaaladda caabuqyada COVID-19.
Waa kuwan dhowr talooyin oo dheeri ah oo kaa caawinaya sida ugu habboon ee safarkaaga Georgia:
Booqo Meelaha la Yaqaan
Uma baahnid qof kuu sheega in sida ugu wanaagsan ee looga hortagi karo sheekada coronavirus -ka cusub ay tahay inaad ka fogaato meelaha dadku ku badan yihiin. Inta badan dalxiisayaasha booqanaya Georgia waxay u jihaysan doonaan magaalooyinka caanka ah, sida Athens iyo Atlanta.
Laakiin Georgia waxay leedahay wax badan oo ay ku bixiso. Haddii aad raadinayso goobo dalxiis oo deggan oo cidlo ah Georgia, tixgeli inaad booqato magaalooyinka aan la dhaafin, sida Snellville iyo Dahlonega. Meelahani waxay ku siinayaan aragti soo jiidashada xiisaha leh ee Georgia iyadoo kuu oggolaanaysa inaad ku raaxaysato fasaxaaga xawaare raaxo leh.
Waxa kale oo aad qorsheyn kartaa safar aad ku tagto magaalada xiisaha leh ee Savannah ama Jasiiradaha Dahabka ah ee kaamilka ah. Ha iloobin inaad hubiso xayiraadaha safarka ee maxalliga ah ka hor intaadan qorshayn safarkaaga.
Joorjiya waxay ku raaxaysataa cimilo hoosaad leh oo leh kulayl dheer oo diiran iyo jiilaal qabow. Gobolku wuxuu u nugul yahay roobab iyo roobab soo noqnoqda. Sidoo kale, cimiladu waxay u egtahay inay kala duwan tahay iyadoo ku xiran dhulka.
Taasi waa sababta had iyo jeer ay tahay fikrad wanaagsan in la fiiriyo cimilada Snellville, Dahlonega, Savannah, iyo meelaha kale ee aad rabto inaad ku booqato Georgia. Waxay hubin doontaa inaad ku raaxaysato fasax madadaalo leh oo aan walwal lahayn inkasta oo uu jiro masiibada.
Ka Digtoonow Badbaadadaada
In kasta oo xarumo badan oo ku yaal Georgia laga yaabo inaysan lahayn siyaasado maaskaro khasab ah, hubso inaad xirato maaskaro mar kasta oo aad booqato soojiidashada dalxiiska. Ha iloobin inaad raacdo nadaafadda gacanta iyo hab -raacyada fogeynta bulshada. Haddii aad u baxayso inaad wax cunto, hubi inaad weydiiso makhaayadda tallaabooyinka badbaadada ee ay hadda isticmaalayaan.
Haddii aad raadineyso baxsad toddobaad-dheer ah ama baxsi toddobaadle ah oo degdeg ah, Georgia waxay leedahay wax ay qof walba u fidiso. Baadhitaanada xannibaadaha safarka ee ugu dambeeyay ka hor intaadan qorsheyn safarkaaga. Hore u sii hubi saadaasha hawada si aad uga fogaato wax kasta oo dhib ah oo aan loo baahnayn inta lagu jiro safarkaaga. Sidoo kale, dooro meelaha aad loo yaqaana si aad uga fogaato dalxiisayaasha isku mashquulsan, kuna raaxayso fasax nabdoon oo nabdoon.